Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: latsaka tsy fidiny ao anatin’ny firaisan-kina | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: latsaka tsy fidiny ao anatin’ny firaisan-kina
Samy manana ny mahamay azy ny firenena tsirairay. Na tsara toy inona aza ny fifandraisana amin’ny firenena samy hafa, na inona fankalazana an’izay hoe miankina amin’ny fifankatiavana noho ny firahalahiana, tsy maintsy ampiharoana ao anatin’izay ny fitsinjovana ny tombontsoa manokan’ny tena. Resy mialoha izay manilika ny fitiavan-tena.
Iaraha-mahafantatra ny haratsian’izany fitiavan-tena izany nefa toe-tsaina manahatahaka fitaovam-piadiana fiarovan-tena mba tsy ho voafitaky ny hafa izay amin’ny ankamaroany tsy manadino fa tena ady no atrehana ao anatin’ny fifandraisan’ny firenena eran-tany na samy mifanaiky aza fa ao anatin’ny fiaraha-midinika manodidina latabatra no anaovana ny ady. Ary na am-pitsikitsikiana aza, samy misakelika hevitra mahery vaika arak’izay azo atao hamaliana ny mety ho tifitra variraraka tsy hisalasalan’ny namana sy sakaiza eo andaniny izay ifampiraharahana.
Raha mbola olona ihany anefa, na samy manana ny fireneny aza dia samy eto amin’ity tany boribory no miara-monina. Tsy ao an-tsaina lalandava angamba amin’ny andavanandro ny fiombonana fananana an’ity tany ity, fa rehefa mananontanona ny loza izay efa mitsidika momba ny fiovan’ny toetrandro dia samy taitra avokoa ka lasa samy mifanentana amin’ny fanaovana ezaka ho fanosehana ny fiovan’ny toetrandro. Ny ezaka voalohany dia ny fampihenana ny fanimbana ny tontolo sy fandotoana ny rivotra ateraky ny fampiasana tafahoatra ireo hery miteraka setroka maloto. Tsy isika velively no lohalaharana amin’izany. Na momba ny indostria na mikasika ny fambolena sy ny sisa, rehefa famokarana dia miankina avokoa amin’ny hery sady manimba ny tontolo no manapoizina ny rivotra. Toy ny fiteny eto an-toerana, samy mandeha samy mitady, any ivelany ny fomba fialan-tsiny amin’ny fitiavan-tena dia ny filazana hoe «samy mijery ny ao am-biliany», ny eto Madagasikara mbola tsy ampy ny ao am-bilin’ny maro, noho izany mbola malalaka ny famokarana.
Na izany aza, tsy afaka hialangalana ny tena momba ny ezaka entina hiarovana ny tontolo. Voalohany tsy manavaka an’izay befandoto amin’ireo kelifandoto ny fiovan’ny toetrandro fa samy ampihariny ny hasiahan’ny rambony, manaraka an’izany. Ny fitandreman-tena sy ny fanajana ny fepetra ho fiarovana sy fanajariana ny tany dia hitondra soa sy hamokatra harena mivantana. Sehatra roa fotsiny dia ampy ahitana an’izany. Voalohany ny fanajanonana ny fampiasana «harona plastika» ahafahana mamelona ny sehatry ny harona sy sobika, faharoa ny famaranana ny doro tanety sy ala hamerenana an’i Gasikara ho nosy maitso.